Maraykanka oo basaasay muwaadiniin Swedish ah | Somaliska
Wasiirka Cadaalada Sweden ayaa xaqiijisay in safaarada Maraykanka ee ku taal Sweden ay basaasid ku haysay muwaadiniin Swedish ah ilaa sanadkii 2000. Arintaa ayaa soo shaacbaxday ka dib markii isbuucaan basaasid midaan la mid ah ay ku dhawaaqtay Norway. "Ka dib xiriir ay sameeyeen Waaxda Amaanka ee Sweden iyo safaarada Maraykanka waxaan xaqiijineynaa in basaasid la mid ah midii ka dhacday Norway ay safaarada maraykanku ka sameysay Sweden" ayay tiri Beatrice Ask wasiirada Cadaalada. Sidoo kale wasiirada ayaa sheegtay in basaasida ay inta badan la xariirtay warbixin ku saabsan shaqsiyaad Swedish oo la aruuriyay sida magacyada iyo sawiro. Safaarada Maraykanka ee Sweden ayaa xaqiijisay jiritaanka barnaamijkaas ayadoo sheegtay in aysan ahayn sida loo dhigay balse ay tahay barnaamij safaarada u isticmaasho sugitaanka amaankeeda oo kaliya. Isbuucaan ayay ahayd markii Norway ay sheegtay in safaarada Maraynkanka ee Norway ku taal ay si sharci daro ah u basaastay muwaadiniinteeda ayadoo aan dowlada Norway la soo ogeysiin. Arinta yaabka leh ayaa ah in basaasida lagu haayay muwaadiniinta Swedish ilaa sanadkii 2000 aysan ka war ahayn dowlada Sweden guud ahaanteeda. Wasiirada Socdaalka ayaan cadeyn in basaasida ay safaarada maraynkanku ku dhaqaaqday ay sharci daro tahay iyo in kale.
Wasiirka Cadaalada Sweden ayaa xaqiijisay in safaarada Maraykanka ee ku taal Sweden ay basaasid ku haysay muwaadiniin Swedish ah ilaa sanadkii 2000. Arintaa ayaa soo shaacbaxday ka dib markii isbuucaan basaasid midaan la mid ah ay ku dhawaaqtay Norway.
“Ka dib xiriir ay sameeyeen Waaxda Amaanka ee Sweden iyo safaarada Maraykanka waxaan xaqiijineynaa in basaasid la mid ah midii ka dhacday Norway ay safaarada maraykanku ka sameysay Sweden” ayay tiri Beatrice Ask wasiirada Cadaalada.
Sidoo kale wasiirada ayaa sheegtay in basaasida ay inta badan la xariirtay warbixin ku saabsan shaqsiyaad Swedish oo la aruuriyay sida magacyada iyo sawiro.
Safaarada Maraykanka ee Sweden ayaa xaqiijisay jiritaanka barnaamijkaas ayadoo sheegtay in aysan ahayn sida loo dhigay balse ay tahay barnaamij safaarada u isticmaasho sugitaanka amaankeeda oo kaliya.
Isbuucaan ayay ahayd markii Norway ay sheegtay in safaarada Maraynkanka ee Norway ku taal ay si sharci daro ah u basaastay muwaadiniinteeda ayadoo aan dowlada Norway la soo ogeysiin.
Arinta yaabka leh ayaa ah in basaasida lagu haayay muwaadiniinta Swedish ilaa sanadkii 2000 aysan ka war ahayn dowlada Sweden guud ahaanteeda.
Wasiirada Socdaalka ayaan cadeyn in basaasida ay safaarada maraynkanku ku dhaqaaqday ay sharci daro tahay iyo in kale.